Dr. Tint Swe's Writings: August 2019
လူသားတွေစာရေးဖို့ ဗျည်းအက္ခရာ တည်ထွင်ခဲ့ကြရာမှာ တုတ်ချောင်း ၊ ပဲပင်ပေါက်စသည် အမျိုးမျိုး အခြေခံခဲ့ကြပေမဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဗမာလူမျိုးတမျိုးတည်းသာ ဝလုံးကိုအခြေခံတည်ထွင်ရေးသားခဲ့ကြသည်ဟု ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးပါသည်၊ ဟုတ်ပါသလား။
ဘီစီ ၅၀၀ နဲ့ အေဒီ ၃၀၀ ကြားမှာစတင်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဗြာဟ္မီအရေးအသားကနေလာတယ်။ ဗြာဟ္မီဆိုတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ လာတယ်။ မြန်မာအက္ခရာတည်ဆောက်ပုံက ဗျည်းအက္ခရာ၊ ဗျည်းတွဲသင်္ကေတ၊ သရအက္ခရာနဲ့ သရတွဲသင်္ကေတတွေ ရောထားတယ်။ သေးသေးတင်နဲ့ ဝစ္စပေါက်တွေလည်းပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ ကနေ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ပျူ၊ မြန်မာ၊ မွန်နဲ့ ရခိုင် မြို့ပြနိုင်ငံတွေဆီရောက်လာတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ရခိုင်၊ ပျူ နဲ့ မွန်နောက်မှသာ မြန်မာစာဖြစ်လာတယ်။ ပါဠိနဲ့ သက္ကတ (ဆန်းစ်ကရစ်) ဘာသာတွေလည်း ရောနှောနေတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာတာတွေရှိတယ်။ မြန်မာစာနောက်မှာ မြန်မာစာအခြေပြု ကရင်၊ ပအိုဝ့်၊ ရှမ်း၊ တိုင်းရင်းသားစာတွေလည်း ပေါ်ထွန်းလာတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာစာမှာ ဗျည်း ၃၃ လုံးပါတယ်။ ဗျည်းတွဲသင်္ကေတတွေကတော့ ရရစ်၊ ယပင့်၊ ဝဆွဲနဲ့ ဟထိုး။ အဲတာတွေ ၂ မျိုးပေါင်းတာလည်းရှိတယ်။
အသတ်ဗျည်း (၁၀) ခုရှိတယ်။ ကသတ်၊ ငသတ်၊ စသတ်၊ ညလေးသန်၊ ညကြီးသတ်၊ တသတ်၊ နသတ်၊ ပသတ်၊ မသတ်၊ ယသတ်။ လက်ရှိသုံးနေတောတွေက က်၊ ခ်၊ ဂ်၊ င်၊ စ်၊ ဇ်၊ ဉ်၊ ည်၊ ဋ်၊ ဌ်၊ ဏ်၊ တ်၊ ထိ၊ ဒ်၊ ဓ်၊ န်၊ ပ်၊ ဗ်၊ ဘ်၊ မ်၊ ယ်၊ ရ်၊ လ၊ ဝ်၊ သ်၊ ဟ်၊ ဠ်။
အခြေခံ (၁၂) လုံးရှိတယ်။ အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ သြ၊ သြော်၊ အံ၊ အို။
၏၊ ၍၊ ၌ တို့က အတိုရေးသင်္ကေတ ၃ ခုဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာဟာ နှစ်ကာလရှည်တယ်။ အခြေခံခိုင်မာတယ်။ ပွါးစည်တယ်။ ပြောင်းလဲတယ်။ ပိုပြီး ရှင်းလင်း လွယ်ကူအောင်သာပြောင်းရိုးရှိတယ်။ မျက်စိအောက်မှာ ပြောင်းခိုင်းတာတွေက မှန်နေတာကို လွဲစေအောင်၊ ရှင်းနေတာကို ရှုအောင် ခက်အောင် လုပ်ခိုင်းတာသာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် သဘောမတူတာ တချို့ရှိတယ်။ ဆောရီး။ ကန်တော့။
အသတ်အကြောင်းက နက်နဲတယ်။ ဝဏ္ဏဗောဓနသတ်အင်းကို ၁၉၆၁ ခု ဇွန်လမှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ညောင်ရမ်းခေတ်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ အရှင်ဥက္ကံသမာလာက ပြုစုထားတာကို ဦးတင်ဧက တည်းပြတ်တာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်း (၁၉၆၄-၆၅) မှာ လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်တယ်။ ပေါ်လစီ တစသတ်တွေ မှားနေတာကို အဲဒီ သတ်အင်းနဲ့ တိုက်ကြည့်ရင် သိတယ်။ အဲတာကြောင့် ဒိုင်ခံထောက်ပြနေတာ။
တန်ဆောင်းပြာသာဒ်စာလုံးပေါင်းကို ခုမှ သတ်ပုံကျမ်းမှာရှာတွေ့လို့ စာရေးလိုက်ပါသည်။ ဇရပ် တန်ဆောင်း ပြာသာဒ် ဥပုသ်ဆောင်စသည်အမည်တွေဟာ အခေါ်သာကွဲပြီး အတူတူပဲလား။ ဓမ္မာရုံဆိုတာရော ဘယ်လိုကွဲပြားပါသလဲ။ ဆရာသိသလောက် ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
သိသလောက်ဆိုတာ အစစ်ပဲ။ တန်ဆောင်း၊ ပြာသာဒ် ကျောင်း။ ဇရပ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကဗုဒ္ခဘာသာနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ဘာသာရေးအမွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေတွေဖြစ်တယ်။
မန္တလေးတောင်ခြေမှာ သုဓမ္မာဇရပ်တွေရှိတယ်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးဆောက်တာ ၃၃ ဆောင်ရှိတယ်။ ရည်ရွယ်ရင်းက ရဟန်းတွေအတွက် ဖြစ်တယ်။
ဓမ္မာရုံဆိုတာ အမည်အတိုင်း တရားဟော၊ တရားနာ၊ သီလယူ၊ တရားထိုင်စရာနေရာ။
တန်ဆောင်းက အမျိုးမျိုး။ အာရုံခံတန်ဆောင်းဆိုတာ ဘုရားကို အာရုံပြုရန်နေရာ။ တန်ဆောင်းတွေဟာ ရှည်တယ်။ ဘုရားဖူး အမြင့်တက်လမ်းကိုလည်းခေါ်တယ်။
ဇရပ်စာလုံးက ဇြပ် မွန်ကနေလာတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ဇရပ်ဆိုတာ လူတွေအတွက်ရော ရဟန်းတော်တွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ထားတာရှိတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ တခါတခါ သာလာယံဇရပ်နဲ့တူတယ်။ လာချင်သူလာ၊ လူလာလာ နွားပါပါ၊ နားပါ၊ နေပါ၊ တည်းခိုပါ။ စည်းကမ်းသမားက မီးဖိုထားရင် ငြိမ်းသတ်ပြီးမှ ထွက်သွားတယ်။ စည်းမထားသူမျိုးက အခင်းကိုချိုးပြီး မီးခိုးမှိုင်းတိုက်၊ ထင်းဆိုက်တယ်။ မိုက်တဲ့သူက အခင်းကြီးသွားတယ်။ (ကန်တော့။)
ပြတင်း = ပြူတင်း
ပြတာန် = မျက်နှာကြက်
ပြတို့ + ထွေးခံ
ပြယယ် = အများ
ပြယာယ် = ပရိယာယ်
ပြဟုပ် = ဒမြ = ဓါးမြ
၂၂-၁၂-၁၉၅၇ နေ့ထုတ် ဟံသာဝတီသတင်းစာ
ဆံ (ဆန်) ဖြူဖြူတခွက်မျှ ထွက်နိုင်ပုံမရ။ (ဦးပုည မေတ္တာစာ)
ရောက်လေရာဘုံဘဝမှ ဦးပုညခင်ဗျာ ခုခေတ်မှာ (တစ်) စိမ့်စိမ့်အောက်မေ့၍၊ (တစ်) ငွေ့ငွေ့ဆင်ခြင်နေကြပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
လက်ဝဲမောင်းကနေ လက်ျာမောင်း ပြောင်းတာ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်က။
ကားတိုက်ခံရမှာစိုးရင် ပလက်ဖေါင်းက လျှောက်လို့ရသေးတယ်။
သတ်ပုံမှန် တတွေကို တစ်မလုပ်ရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးတာ နဝတ လက်ထက်က။
လက်ထက်ကို လက်ထပ်လို့ ရေးနေကြတယ်။
ဗိုလ်လို့ပေါင်းတာ မှားလားဆရာ ငယ်ငယ်က ဒီလိုပဲသင်ခံခဲ့ရတော့
ဘယ်နေရာမှာ သုံးသလဲအရ ဗိုလ် နဲ့ ဘို မတူကြပါ။
စစ်တပ်အရာရှိတိုင်းရဲ့ရာထူးမှာ ဗိုလ်ပါတယ်။ လူအမည်တွေမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေးလေ့ရှိတယ်။ ပြည်ပထွက်တဲ့ အမတ်တွေထဲမှာ ဗိုလ် လည်းရှိ ဘိုလည်းရှိတယ်။ ကလောင်အမည် ဗိုလ်တာရာ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ ဗိုလ်သ္ခင်ဆရာ ရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာ ဗိုလ်အောင်ဒင်။
၁။ နာမည်ကြီးအသားကင်ဆိုင် ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင်တဲ့ မနေနိုင်လို့ ဝင်ပြောခဲ့သေးတယ်ဆရာ။
ဟုတ်။ တယောက်က ပို့တာရတယ်။
၂။ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တာ့အသံပါဆရာ။
ရေးတော့အမှား။ ဖတ်ကားတလွဲ။ ထပ်ဖြည့်ဦးမယ်။ သင်တော့ (တစ်) ခြား။ မြန်မာအစ (တစ်) ကောင်းကတဲ့။ အလုပ်ခေါ်စာတခုမှာ (တစ်) ရုတ်စကား တတ်ရမည်တဲ့။
(တစ်) ခါ (တစ်) ရံ၊ (တစ်) ခါတရံ နဲ့ တခါ (တစ်) ရံတွေကို တခါတရံလို့ ဘယ်လိုမှ တခါတရံသံ ထွက်မရ။ တစ်တစ်ခွခွ ဖတ်ရ၊ သီချင်းဆိုရတယ်။
သတ်ပုံပြင် မြန်မာစာအဖွဲ့ကြီး အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
မက်ဆေ့ခ်ျတခုရတယ်။ တော်တော်ဆိုးနေပြီဆရာ သက်ဆိုင်ရာကပါ တလွဲတွေလုပ်နေတယ် Eng မမှန် မြန်မာမှား တဲ့။
ဟုတ်။ South Moke တောင်ဘက်မုဒ်လို့ရေးထားတာနဲ့ လမ်း ၃၀ လို့ရေးထားတာတွေကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့တယ်။ တောင်ဘက်မုဒ်အောက်မှာ တယောက်က ကွန်မင့်ရေးတာ နည်းနည်းရိုင်းတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနဲ့ မြန်မာသတ်ပုံ သတိထားရတဲ့စာလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မုဒ် သတ်ပုံမှားနေတယ်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၊ သမုဒ္ဒဇာမင်းသမီး။
လမ်းကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာတွေက အတော်ကို များတယ်။ Road, Artery, avenue, boulevard, course, drive, expressway, highway, lane, line, pathway, pavement, roadway, route, street, subway, thoroughfare, track, trail, way စသဖြင့်။ ဂျီပီအက်စ် ခေါ် ဂြိုဟ်တုလမ်းပြစံနစ်သုံးတဲ့အခါ စာလုံးလွဲရင် လမ်းလွဲမယ်။ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ စံသတ်မှတ်ချက်ထားရတယ်။
Moke ဆိုတာ မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီးကိုပြောတာလား မသိပါ။ မှားနေတယ်။ ဘုရားကြီးမှာ မုခ်လေးခုရှိတယ်။ အထင်ရှားဆုံးက တောက်ဘက်မုခ်။
အဋ္ဌမုခ်အင်း (ရာဇဂြိုဟ် မပါသောအင်း)
အဆောက်အအုံတွေမှာ ဆန်းကြယ်လှပ ခန့်ညားအောင် တည်ဆောက်ထားတာကို Arc မုခ်ခုံးလို့ ခေါ်တယ်။ ပဲရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ Arc de Triomphe (Triumphal Arch of the Star) က ထင်ရှားတယ်။ ခရစ်ယန် ဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်းရှိတယ်။ St Joan of Arc ကအလွန်ထင်ရှားတယ်။
Arcade ကတော့ အမိုးခုံးစင်္ကြံလို့ ခေါ်တယ်။ မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီးရဲ့ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်နဲ့ မြောက် မုခ်ဦးတွေကနေ အထဲဝင်သွားရင် ဈေးရောင်းတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။
တာ နှင့် သာ အသုံးလေး သိချင်လို့ပါဆရာ။ မနက်ပိုင်းမှာတာ ရုံးသွားရတယ်၊ မနက်ပိုင်းမှာသာ ရုံးသွားရတယ်၊ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ ဆရာ။
မထွေးမပါ တို့ချည်းသာ ဖြစ်လို့ မနက်ပိုင်းမှာသာက မှန်။
သာကိန် (သာကိန္ဒ) = သာကီဝင်မင်းတို့ကို အစိုးရတော်မူသောမင်း
သာခွါ = ဘော်ငွေ]အမည်
သာချင်း = သာယာစွာသီဆိုရင် ရေးစီသောကဗျာ
သာစွလေ = ကောင်းမွန်စွလေ
သာဓက = အထောက်အထား၊ ဥပမာ
သာမန် = သာမည = အများနှင့်ဆက်ဆန်ခြင်း
သာရကာ = သာလိကာခေါ်သည့် ဆက်ရက်ငှက်တမျိုး
သာရဂန် ( သာရ + ဂန္ဓ) = စန္ဒကူးသရက္ခန်
သာရာစီး = အခွင့်အရေးရသည့်ဘက်ကိုလိုက်လေ့ရှိသူ၊ အခွင့်အရေးသမား
သာလကာ = မပင်မပန်း သက်တောင့်သက်သာ
သာလက် = မပင်မပန်၊ အလွယ်တကူ
သာဝအောင် = သာယာသောပွဲ
သာအားကြိုး = လွန်စွာကြိုးပန်းအားထုတ်ခြင်း
သာမော = ညီညာသော၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော
သာနိုးပွင့် = ကံ့ကော်ပွင့်
အဲဒီပုံထဲက မင်းတြားနဲ့ မင်းတရား ဘယ်ဟာ အမှန်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။
အရင်က တရားကို တြားလို့ ရေးခဲ့ကြတယ်။ ဆရာကို ဆြာလို့ရေးကြတယ်။
ရကောက်ကို ရရစ်နဲ့ ရေးတယ်။ ယပက်လက်ကို ယပင့်နဲ့ ရေးကြတယ်။
ပင့်ရစ်မနိုင် ရခိုင်မေးလို့ အဆိုရှိတယ်။ မြန်မာလို မြကို ရခိုင်တွေက မရသံထွက်တယ်။ မျက်ို အဲလိုမထွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အချုပ်အခြာမှာတော့ ရခိုင်နဲ့ မြန်မာ မတူတော့ပါ။ ရခိုင်လိုက အချုပ်အချာလို့ ရေးတယ်။
အဲတာကြောင့် မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာနည်းနဲ့ သင်လို့ မရပါ။ မ နောက် ဘဲ လည်းလိုက်။ ပဲ လည်းလိုက်တယ်။ ရေတွက်လို့ရတိုင်း တစ်ဆိုတာ မမှန်။ ပင့်ရစ်မနိုင် ရခိုင်ကို အကုန်မေးမရပါ။
သုံး သုန်း သုည်း အောက်မှာ ကွန်မင့်တခုက စိတ်သုန်းလို့ လာရေးတယ်။
မှားတယ်။ ဆောရီး။ စိတ်သုန်းလို့ရေးခြင်းဟာ စိတ်ကုန်တာ။ စိတ်မရှိတော့တာ။ စိတ်ပျက်သုန်းတာ။ ရုပ်တွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေ၊ လူတွေ၊ သစ်ပင်တွေနဲ့ မဆိုင်။
ပုစွန်ဆိတ် (ဗုဇွန်ဆိတ် ယခင်အသုံး)
ဆန်တစိတ် (ဆန်တစ်စိတ် မဟုတ်)
ဆိတ်ကွယ်ရာရှိ။ မျက်ကွယ်ရာရှိ။ စိတ်ကွယ်ရာမရှိ။
နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အနည်းဆုံး မေးခွန်း ၅၀ ဖြေရတယ်။ မြန်မာလိုရေးမေးသူက ၉၉့၉% ရှိတယ်။ မြန်မာစာမှာ ရရစ်မပါ၊ ဝဆွဲမပါတဲ့ရောဂါတွေနဲ့ စသတ်အပိုထည့်တဲ့ နာတာရှည်ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗျည်း ၃၃ သာမက၊ အင်္ဂလိပ် စာလုံးတွေပါ အပိုထည့်နေကြတယ်။
ကာကွယ် ကုသရန် လိုအပ်နေပါတယ်။ အစိုးရအားကိုးလို့ မရနိုင်။ စစ်တပ် အားကိုးလို့လည်း မရနိုင်။ မြန်မာစာ ပါမောက္ခတွေ ဆရာဆရာမတွေကိုလည်း အားကိုးမရ။
အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နာထော မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။
တယ် နှင့် တရ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/blog-post_11.html
တရ် သို့မဟုတ် ကုလားသံ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blog-post_91.html
ပါပီ ကျိ တေ ဖစ် ကူးစက်ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/blog-post_86.html
၁။ ဆရာ အရေးပေါ်ဆေးသောက်ရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် သားအိမ်ပြင်ပ ဖြစ်န်ုင်တယ်လ်ို့ ဆရာရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ် ၁လ နဲ့ ၃ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာ ဆရာပြောသလို ဖြစ်နေမာဆိုးလို့ ဘလိုစစ်ကြည့်ရမလဲ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ Ultrasound ရောရိုက်လို့ရလားဆရာ ဘလိုသိနိုင်မလဲပြောပြပေးပါဦးနော်
ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ လို့ ရေးရတယ်။ မာဆိုတာ မပျော့တာ။ ဆိုးသွားမှာကို စိုးရိမ်သည်။
ဘလို မဟုတ်။ ဘလိုဆိုတာ အဘလို ဘဘလို ဘကြီးလို။ ဘယ်လို ဘယ်ကဲ့သို့လို့ ရေးရ။
၂။ ဟလ်ို ဆရာ
ဟလို မဟုတ်။ ဟယ်လိုလို့ရေးရတယ်။ ဟဒယရွှင်ဆေး၊ ပါးစပ်ဟပါ၊ စကားတခွန်းမဟ၊ ဟလဝါတို့မှာသာ သုံးရတယ်။
Allergy testing အလာဂျီစစ်နည်းကို ဓါတ်ခွဲခန်းတိုင်းမှာလုပ်မရ
ကျွန်မအသက် ၃၁ အိမ်ထောင်သည် ကလေး ၃ယောက်ရှိသည် ဖြစ်တာကသာခန္ဓာကိုယ်ယားတယ် အသား မစားဘူး ပင်လယ်စားမစားဘူး ငပိငခြောက် မစားဘူး စားမိရင်မျက်နှာမှာအဖိန်ဖိန်ဖြစ်လာတယ် ဖြစ်နေတာ ၁နှစ်လောက်ကြာပြီး ဘာကြောင့်လဲဆရာ သွေးစစ်တာလဲဘာမှမရှိဘူး အားလုံးကောင်းတယ်တဲ့။
1. Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/05/allergy-medications.html
2. Allergy Relief Kit (အလာဂျီ) ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးအိတ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/allergy-relief-kit.html
3. Allergy testing (အလာဂျီ) စစ်ဆေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/allergy-testing.html
4. Allergy Triggers (အလာဂျီ) ရစေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရား (၁ဝ) ပါး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy-triggers.html
5. Allergy အလာဂျီ သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/allergy.html
အလာဂျီစစ်နည်းကို ဓါတ်ခွဲခန်းတိုင်းမှာလုပ်မရ။ တချို့ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာသာ စစ်လို့ရတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရရစ်မပါတဲ့ပြီးကို ပြင်လိုက်တယ်။
လူတွေ 3.1 k တောင်ဖတ်ပြီး ရှယ်နေကြလို့ စိတ်ပူလို့မေးတာပါ ဆရာ့အနေနဲ့ ကျမကိုမဖြေပဲ ဒီဆေးကို ဒီတိုင်းလျှောက်သောက်မနေဖို့ ဆရာ့ page ကနေရေးရင် လူတွေကို ကယ်တင်နိုင် မယ်ထင်လို့ပါ ကျေးဇူးပါ။
အရမ်းပျော်တာပဲ နှစ်လလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်နာကျင်ရတဲ့ဝေဒနာတွေပြေးပြီလေ အိပ်ရာထတာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဘဝတူ ခံစားနေရသူတွေကို ဝမ်းသာအားရ သတင်းပေးရသေးတယ် ဘလာ ဘလာ ဘလာ။
မတတ်နိုင်လောက်။ မြန်မာပြည်မှာ မဟုတ်တာ မှားတာ လွဲတာ လိမ်ညာတာဆိုရင် အလွန်သဘောကျပြီး ပွဲစားလို ရှယ်သူတွေ များတယ်။
ကယ်မရ ကုမရ ပြင်မရလောက်ပါ။ အဲတာ အစိုးရနဲ့ မဆိုင်။ စစ်တပ်တပ်နဲ့လည်း မဆိုင်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မဆိုင်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မဆိုင်။ တရုပ် ကုလားနဲ့ မဆိုင်။ အမေရိကန်ဆန်ရှင်နဲ့လည်း မဆိုင်။
လူတွေရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဆိုင်တယ်။
ကျန်းမာရေးစံနစ်အဆင့် ၁၉၀ က တက်လမ်းမမြင်သေး။ ဆောရီး။
ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော့်အသက် ၁၉ နှစ်ပါ။ pH 5.8 အက်စစ်ဓာတ်ပါသောရေကိုသောက်ရင် ရေရှည် ရေတို ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်နိုင်တာလဲ သိလိုပါတယ်ခင်ဗျား
ရေဆိုတာ သောက်ရေ သန့်တာ သင့်။ ကြော်ငြာဆိုတာ ပိုက်ဆံ။ ကိုယ့်မိဘတွေ ဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ထူးခြားတာမရှိ။
1. A glass of water ရေတဖန်ခွက်ဟာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/a-glass-of-water.html
4. Detox Water လူကြီးမင်းကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေရှိနေသတဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/detox-water.html
5. Drinking water ရေကုသိုလ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-please.html
6. Drinking Water သောက်ရေ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/drinking-water.html
12. Water and Energy 2014 ရေနှင့်စွမ်းအင် ၂ဝ၁၄ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-and-energy-2014.html
13. Water breaks ရေသောက်ချိန် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/water-breaks.html
14. Water for babies ကလေးနဲ့ရေ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/water-for-babies.html
15. Water Please ရေလှူကြပါဗျာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-please.html
16. Water poisoning ရေအဆိပ်သင့်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ter-poisoning.html
17. Water requirements ရေဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-requirements.html
18. Water, water everywhere and notadrop to drink စေတနာတစက် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/water-water-everywhere-and-not-drop-to.html
19. Waterborne Diseases ရေကတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/waterborne-diseases.html
20. World Water Day ကမ္ဘာ့ရေနေ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/world-water-day.html
စက်ဘီးတကာ့ ထိပ်သီးအောက်မှာ ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ငယ်ငယ်ကအိမ်မှာစီးနေခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဖင်ထိုင်ခုံဘု ရှေ့ထွက်နေတာ ဘားတန်း ခွစီးတော့ စောင့်မိတာ နာနေရောပဲ တဲ့။
ဆောင့်မိတာလို့ ရေးရတယ်။ သူငယ်ချင်းကို စောင့်နေသည်။
၂။ ကျွန်တော် အသက် ၂၁ နှစ်ပါ၊ ယောက်ျားလေးပါ။ အဲ့သည်နေ့က နောက်မှာ ဆောင့်နေတဲ့ လူနာတွေအရမ်းများတော့
၃။ ကျတော် အသက်၂၈ပါ။ ဘီပိုးရှိပါတယ်။ ဆရာမက ဆောင့်ကြည့်ကုထုံးနဲ့ကုသမယ်ပြောပါတယ်။
၄။ ဆရာရှင့် ဆောင့်ခဲ့လည်း မသက်သာလို့ တွေ့လို့ပါဆရာ။ စောင့်အသုံးနှင့် ဆောင့်အသုံးလေး သိပါရစေရှင့်။
တလံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။
ဗေဒါပျံအံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ဘဲ။ ။
ဆရာ မေဒေး ဆိုတာအရေးပေါ်နေလို့အကူအညီတောင်းတာမဟုတ်လားရှင့် ရုပ်ရှင်ထဲတွေ့ဘူးတာပါ
မေးသင့်မေးထိုက်တယ်။ Labor Day လေဘာဒေးစာထဲမှာ မေးဒေလို့ပါတယ်။ အဲတာက May Day ဖြစ်တယ်။ အခုမေးတာက Mayday မတူကြပါ။
Mayday မေဒေးဆိုတာ အသံကိုအသုံးပြုတဲ့ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးမှာ အရေးပေါ်အကူအညီတောင်းတဲ့ ဝေါဟာရ ဖြစ်သုံးပါတယ်။ Distress signal လို့ခေါ်တယ်။
အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခြေအနေတွေမှာ သုံးတယ်။ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ မီးလောင်တာ၊ ရဲအလုပ်နဲ့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဌာနတွေမှာလည်း ဒီစာလုံး သုံးကြတယ်။ အဓိကတော့ လေကြောင်းနဲ့ ရေကြောင်းမှာ သုံးကြတယ်။ အမြဲတမ်း "Mayday mayday mayday" လို့သုံးပါတယ်။
သမိုင်းမှာ ၁၉၂၁ ခုနှစ်က လန်ဒန်မြို့တော် Croydon Airport လေဆိပ်မှာ အထက်တန်း ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ Frederick Stanley Mockford က စတင်သုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစကားလုံးက ပြင်သစ်လို m'aider (help me) ကနေလာပါသတဲ့။
ဒီစကားလုံးအရင်က SOS စာလုံးကို Morse code မော့စ်ကုဒ်မှာ သုံးပါတယ်။ မေဒေးအသုံးကို ၁၉၂၇ ခုနှစ် ဝါရှင်တန် နိုင်ငံတကာ ရေဒီယိုတယ်လီဂရပ် ကွန်ဗင်းရှင်းမှာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းစက်ဘီးမှာ အလွန်သားနား ခိုင်ခန့်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် လက်ရာတခုဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ခုခေတ်ကြောငြာတွေမှာ (တစ်) ကာ့ ထိပ်သီးတဲ့။ လက်ရာ (တစ်) ခုတဲ့။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာ ဟမ်းဘားစက်ဘီးလောက် မခိုင်မာပါတကား။
တလုံး-တလုံးသော အက္ခရာသည်လည်း ဘုရားတဆူ-တဆူနှင့် အကြင့်ကြောင်း အလားတူသည်ဖြစ်ရာ၏။
စာတစ်လုံး ဘုရားတစ်ဆူလို့ တကိုမလိုအပ်ဘဲ တစ်နေကြသူတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပုံ Zaw Min-Oo ကျေးဇူး
အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေးတွေ တောက်လျှောက်မိနေပါတယ် မိတိုင်းလည်း စံချိန်တင်ကိန်းဂဏန်းတွေချည်းပါပဲ အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကမ္ဘာမှာ အဆင့်လောက်မှာရှိလဲ သိချင်လို့ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
မူးယစ်ဆေးက အမျိုးမျိုး။ စာတွေအများကြီးရေးတင်တယ်။ ဘလော့မှာအားလုံးရှိတယ်။ ဘိန်းစိုက်တာ အာဖကန်နဲ့ မြန်မာပြည် ၁ နဲ့ ၂ လုနေတယ်။ စိတ်ကြွဆေးမှာ ဗမာပြည်က ထိပ်ကထင်တယ်။ ဆေးခြောက်ဂဏန်းတော့ မသိသေး။ တလောက ဆေးခြာက်စာတင်တော့ ဆေးခြောက်သမားတွေက ဝိုင်းဆဲကြတာ လူတရာကျော်တယ်။ ပို့စ်ကို ဖျက်လိုက်ရတယ်။ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းတင်လိုက်တယ်။ ကိုကိန်းကတော့ တောင်အမေရိကကအများဆုံး။ ဘိန်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဟာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ လက်နက်ကိုင်ဆိုတာ သူပုန်လို့ခေါ်သူတွေကိုသာ ပြောတာမဟုတ်။ ငွေမည်းတွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ငွေဖြူဖြစ်ပြီး နဝတ လက်ထက်မှာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ပြောရတာတာ အားနာရတယ်။ သိလေလေ ရင်နာစရာကောင်းလေလေ။ တိုတိုသာ ရေးပါရစေ။
သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဆေးခြောက်စာတင်လို့ အဆဲခံရတယ်ဆိုတဲ့အတွက် စ်ိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။
Amphetamines (1) ယာဘ-ရာဘ-ရာမ-ယာမ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-1.html
Amphetamines (2) ရာမ ဇာတ်လမ်းတခု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-used-in-military.html
Amphetamines စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/amphetamines.html
Amphetamines ရာမဇာတ်လမ်းတပုဒ် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/amphetamines.html
Burundanga ပဒိုင်းပွင့်လိုဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/burundanga.html
California nuns fight ban on marijuana businesses ဆေးခြောက်နှင့် သီလရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/california-nuns-fight-ban-on-marijuana.html
Carfentanyl ဆင်ဖြူတော် မူးယစ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/carfentanyl.html
Common Medicines you really shouldn’t mix with Alcohol အရက်နဲ့တွဲရန်မသင့်သောဆေးများ
Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrup-addiction.html
Drug Abuse ဆေးဝါးတလွဲသုံးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/drug-abuse.html
Drugs and politics ဆေးတန်ခိုးနဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်နိုင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-and-politics.html
Drugs used in the military စစ်သုံးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-2.html
Drugs ဇေကမ္ဘာအနားမှာ ကုဋေကုဋာများစွာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/drugs.html
Ecstasy Drug Tests စိတ်ကြွဆေး ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy-drug-tests.html
Ecstasy စိတ်ကြွဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy.html
Effects of Cannabis ဆေးခြောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/effects-of-cannabis.html
High မူးယစ်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/high.html
Ice ဆိုတာ ရေခဲမဟုတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ice.html
Inhalant abuse လမ်းဘေးဆေးရှူ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/inhalant-abuse.html
Marijuana addiction ဆေးခြောက်က စွဲသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/marijuana-addiction.html
Marijuana ဆေးခြောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/marijuana.html
Methadone မက်သဒုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/methadone.html
Methamphetamine (မက်သမ်ဖတမင်း) http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/methamphetamine.html
Military and Crystal Meth စစ်တပ်နဲ့ စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/military-and-crystal-meth.html
Misuse and Abuse of Prescription Drugs တရားဝင်ဆေး တလွဲသုံးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/misuse-and-abuse-of-prescription-drugs.html
Molly လူငယ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ စိတ်ကြွဆေး မော်လီဆေးပြား ပိုဆိုးဝါး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/molly.html
Opium ဘိန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/opium.html
Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကနေလုပ်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pseudoephedrine.html
Stimulant and Stimulating စိတ်ကြွသတင်းနှင့် စိတ်ကြွဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/stimulant-and-stimulating.html
Weed မူးယစ်အထူးကုဆရာဝန်က အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/weed.html
Yaba ယာဘ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/yaba.html
ကနေ့ နည်းနည်းစောပါသည် ည ၁ နာရီ။
မဟုတ်တရုတ်တွေက မနက်ခင်းမှာသာ ပိုများသည်။
ညပိုင်းမှာတော့ တနေကုန်မှာလာတာတွေနဲ့ ထူးမခြားတဲ့ သတ်ပုံအလွဲအမှားများသာဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီကူးစက်ရောဂါ လူနာတွေကလည်း ဆရာဝန့်စကား ပယ်ရှားကြတာတူညီ။
အသက် ကျား မ မပြောကြရာမှာလည်း ဖက်ရှင်တူဝတ်ဆင်ကြသည်။
နက်ဖြန်မှာ မေးနည်းကို ဆယ်ခါပို့ဘို့ အသင့်ပြင်ထားကာ အိပ်ပါတော့မည်။
မိသားတစုပို့စ်အောက်မှာ ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ရှေးမူ တွေကို စီစစ်ပြီး အမှန်ပြင်သင့်တယ် တဲ့။
(တ) ကို (တစ်) လုပ်ခိုင်းချင်ပုံရတယ်။ မှန်နေတာတွေကို အမှားမပြင်သင့်ကြပါ။ အရင်က သူငယ်တန်းဖတ်စာကို မှားအောင်မရေးပါ။
ခေတ်အပြောင်းအလဲဆိုတာ ခက်တာကိုလွယ်အောင်၊ ရှင်းအောင် ပြောင်းတာမျိုး။ မှန်တာကို မှားအောင်နဲ့ လွယ်တာကို ခက်စေအောင် မပြောင်းရပါ။
ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်းမကြွယ် (မလွယ်) နဲ့။ မရှိတာထက် မသိထာခက်ကလည်း စကားပုံတွေဖြစ်တယ်။
စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီး ရွှေရောင်ဆေးသုတ်ပြီးကြပြီ။ ရှေးကမှန်နေတာတွေကို မတတ်ဘဲနဲ့ လိုက်ပြင်ချင်သူမျိုးဟာ ပုဂံရွှေစည်းဂုံဘုရားကို ထုံးသင်္ကန်းကပ်ချင်သူ စိတ်ထားမျိုးဖြစ်တယ်။
မြစေတီကျောက်စာကို အဓိပ္ပါယ်သဘောပေါက် နားလည်စေအောင်သာ ရှင်းလင်း ရေးရတယ်။ အသစ်ပြန်မရေးကောင်းပါ။
ခေတ်ဆိုပြီးပြင်သူတွေကြောင့် မြန်မာစာကြယ်တလုံးဟာ (တစ်ဖုံး) လို့သာ နေရရှာတယ်။
ကင်ဆာလို့ ရေးရ ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးလို့ ရေးရ
ဆရာခမျာ ကျွန်တော်၏အဖေ အသက် ၈၅နှစ်ပါ။ လည်ချောင်းအစာပြွန်မှာ ကင်စာဖြစ်နေပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးကုသရမည်ဟု အထူးကုဆရာမှပြောပါသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသနည်းနှင့်ကုသခြင်း၏ကောင်းကြိုးဆိုးကြိုးများကို သိလိုပါ၍ ရှင်းပြပေးပါဆရာခမျာ။
ကင်ဆာလို့ ရေးရ။ ကင်ဆာမှန်သမျှ အဆင့်နဲ့ အမျိုးအစားအရ စံနစ်တကျ ကုသရ။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေရှိ။ အဆိုးကြီးနဲ့ အဆိုးလေး လဲကြရ။ ဆောရီး။
Head and neck radiotherapy side effects ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်း ဓါတ်ကင်ရခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
၁။ Sore mouth and difficulty swallowing ပါးစပ်နာပေါက်၊ အစာမျိုရခက်။ သွးထိခိုက်ခြင်း။
၂။ Tiredness and sore skin in the treatment area မောပန်းခြင်း၊ ရောင်ခြည်ထိရာနေရာ အနာပေါက်ခြင်း။
၃။ Weight loss ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း။
၄။ Changes to your voice အသံပြောင်းခြင်း။
၅။ Hair loss ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း။
ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးလို့ ရေးရ။
Cancers ကင်ဆာ ကျဆုံးပါစေ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/cancers.html
လေးစားပါတယ် ဆရာ။ ပြည်ပမှာ နှစ် ၃၀ ခန့် နေထိုင်သူက ပြည်တွင်းက မြန်မာစာကို ပြင်ပေးရတယ်ဆိုတော့။
အဝေးကပင် မြင်နိုင်ပါသည်။ Smile!
ကျွန်တော်က ပြည်ပထွက်နေရတော့ ပြည်တွင်းထုတ်စာအုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။ နဝတ-နအဖ စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ အတွင်း-အပြင် ဆက်သွယ်လို့မရ။ သာရေးနာရေးတောင် ရေးမရ၊ ပြောမရ။ သိသွားရင်ထောင်ကျမယ်။ ကျွန်တော့်အမေဆုံးတာ လေးလနေမှသာသိခွင့်ရတယ်။
တဖြည်ဖြည်းနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေ မှာလို့ရလာတယ်။ ဝမ်းသာပေမဲ့ မျက်လုံးပြူးစေတယ်။ သတ်ပုံတွေကို ပြင်ရေးထားတယ်။ ဟိုအရင်ကစာအုပ်တွေ ပြန်ထုတ်တယ်။ တထောင့်တညကို တစ်ထားတယ်။ ဒါးကို ဓါးလုပ်ထားတယ်။ တရာက (တစ်) ရာတဲ့။ ပျက်ကုန်ပြီလို့ သိလိုက်တယ်။
တခါတလေမှာ အပြင်ထွက်ကြည့်မှ သိတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် စက်ဝိုင်းအပြင် သေတ္တာအပြင် ထွက်ကြည့်ပါလို့ ပြောကြတာ။
သူများအိမ်ခေါင်းမိုးသာ မြင်ပြီး၊ ကိုယ့်တံစက်မြိတ်ကို မမြင်သူမျိုးရှိတယ်။ ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လသာဆိုတာလည်း ဆိုစကားတခုရှိတယ်။
မြန်မာစာ အချုပ်အနှောင်လွတ်ပြီးသကာလ ကောင်းကင်ကြီးမှာ သာနိုင်ပါစေသတည်း။
၂၂နှစ် ကျား ဆရာခင်ဗျ ကျွန်တော့်မေးစေ့ညာဘက်ထောင့်လေးမာ အကျိတ်သေးသေးလေးစမ်းမိလို့ လှုပ်လို့လဲရတယ် စမ်းကြည့်တော့ ဘာဖစ်လို့လဲမသိဘူး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဦး ဘာတေလုပ်သင့်လဲ လေးစားလျက်
Neck Glands လည်ပင်း အကျိတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/neck-glands.html
ထောင့်လေးမှာလို့ ရေးရတယ်။ မာဆိုတာ မပျော့တာ။ အဲလိုမှားရေးနေသူတွေ နေ့တိုင်းလာတယ်။
Hard Neck လည်ပင်းမာ သို့မဟုတ် မပျော့သောလည်ပင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/hard-neck.html
ဘာဖြစ်လို့ရေးရတယ်။ ဖစ်ဆိုတာ ဦးဖစ် ဒေါ်ဖစ် ဖစ်လမ်းလို့သာရှိတယ်။ အဲလိုမှားရေးနေသူတွေ နေ့တိုင်းလာတယ်။ မြန်မာစာ ဘာဖြစ်နေသလဲ မသိ။
ရေးတာကတော့ ဧရာဝတီမှာ။ တင်ပေးသူက မန္တလေးသား။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီမှာပညာသင်ခဲ့သူဖြစ်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ အခု မန္တလေးမှာ တာဝန်ယူနေသူတွေထဲမှာလည်း ဆရာဝန်တွေပါတယ်။ ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ လေးတော်တင် ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲကလို သားအဖချင်းကြွားကြတယ်။
ဧရာဝတီနဲ့ မန္တလေးကိုတော့ အခုထိ သတ်ပုံပြောင်း အရေးမခံရသေး။ ကောင်းတယ်။
နှစ်တရာတံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးရဲ့ စာနယ်ဇင်းနဲ့ စာပေမှာ အထင်ကရ လူထုတိုက်ကတော့ တစ်နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပြေးသွားပြီ။ နှမြောလိုက်တာ။
ကျွန်တော်တော့ မီမှာမဟုတ်။ နှစ် ၁၅၀ တံဆိပ်ခေါင်းမှာ ဘယ်လိုရေးကြမလဲ။ သည်တိုင်းသာဆို မန်းဒလိမ်းဖြစ်စရာ လမ်းကြောင်းမှာ ခရီးတဝက်ရောက်နေပြီ။ မန္တလေး ကုသိုလ်တော်ဘုရား ကျောက်စာတွေကို သတ်ပုံပြင် စိုက်ထူကြတဲ့ခေတ်ကို ဦးတည်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တော့ မီမှာမဟုတ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဌမဆုံးတက္ကသိုလ် နှစ်တရာပြည့်တော့မယ်။ တချိန်က ဘာသာစုံလျှမ်းလျှမ်းတောက်ခဲ့တဲ့ မန်း နဲ့ ရန်ကုန်က တက္ကသိုလ်တွေကို လွမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လွမ်းတာက စိန်ပန်းပင်တွေနဲ့ သစ်ပုပ်ပင်ကြီး မဟုတ်ပါ။ အင်းယားနဲ့ ရေနီမြောင်းက ဇာတ်လမ်းတွေ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာစာကို မှန်အောင်သင်ပေးတဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလသာဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်မြန်မာစာကို မီအောင် သင်ပေးနိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ် တခုနှစ်ခုလောက်သာရှိရင်ဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်ပါတယ်။
(စ) ဆရာဇော်ဂျီ၏ စာပေရှုခင်းစာအုပ်ကို ဖတ်တယ်။ တစ်တွေ ရေထားတယ်။ နောက်ရိုက်စာအုပ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့ရသည့်မှာလည်း မိသားတစု လို့ ပဲသင်ခဲ့ရ မိသားတစ်စု မသင်ခဲ့။ ကျွန်တော်က ၁၉၇၃ ခုဖွား။ အာဏာရှင်တွေ တတ်ပြီး နောက်မှ လူဖြစ်၏။ (ဆုံး)
(တစ်) မလုပ်ရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးတဲ့ နဝတ နဲ့ ဆင်ဆာအဖွဲ့ ရှိခဲ့တယ်။ အဲတာတွေ အခုမရှိတော့ပါ။ အကျင့်ဆိုး ဆက်ရှိနေတယ်။
မွေခံထိုက်စေ မြန်မာပြည်။ ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြု မဟုတ်။ နေပြည်တော် အသိအမှတ်ပြု ဟုတ်။
ဆရာတင်မိုး ဘော်စတွန်မှာ ရောက်နေစဉ် ၃၁-၈-၂၀၀၁ နေ့က ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာ
သံသရာ (တစ်) ကွေ့ မဟုတ်။ (တစ်) ဖဝါးမကွာ မဟုတ်။
ပုံ ကိုခင်မောင်လေး ကျေးဇူး။
ည ၂ နာရီ
ဆရာတင်မိုးရဲ့ လမင်းမေမေ တင်လိုက်သည်။
တထောင်လောက်ထဲက သုံးခုသာ ပို့လိုက်တယ်
၁။ ဒီကနေပဲမေးပါရစေဆရာ။ တ မှာ စသတ် ပါတာနဲ့ မပါတာ ဆရာတင်ထားတဲ့ပို့စ်ရဲ့ လင့် ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ wall မှာပြန်ရှာပေမဲ့ရှာမတွေ့ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
၂။ တချို့ စကားလုံးက တစ် နဲ့ရေးမှအဓိပ္ပါယ်ပေါ်တာရှိလို့လေ
တစ်လို့ပြင်တာ ပလီတာ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/06/blog-post_435.html
အပူချိန် ကျကျလာတာကို သိလာရတယ်။
ပန်းတကာတို့ အစွမ်းကုန် ပွင့်ရှာကြသည်
ကြောက်ရတဲ့ မပူမနွေးတဲ့ စကားလုံး မသုံးကြေး။
ကင်ဆာကြောင့် မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး Bagan Thar မှာ December 10, 2018 နေ့က တင်ထားတယ်ဆိုပြီး အခု ပေါ်လာလို့။ သတင်းလား၊ လိမ်ညာတာလား။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း တကမ္ဘာလုံးမှာ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးရသူပေါင်း ၉့၆ သန်းရှိခဲ့တယ်။ လူ ၆ ယောက် သေဆုံးတိုင်း ကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးရတာ ၁ ယောက်ရှိတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကင်ဆာလူနာသစ်ပေါင်း 1,735,350 ယောက်ရှိပြီး 609,640 ယောက် သေဆုံးခဲ့တယ်။ အဖြစ်များဆုံးကင်ဆာတွေကို အစီအစဉ်အတိုင်း သည်လိုရှိတယ်။ အရင်ဆုံးရေးတာတွေက ပိုဖြစ်တယ်။
၁။ breast cancer ရင်သားကင်ဆာ၊
၂။ lung and bronchus cancer အဆုတ် ကင်ဆာ၊
၃။ prostate cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊
၄။ colon and rectum cancer အူမကြီး ကင်ဆာ၊
၅။ melanoma of the skin အရေပြားကင်ဆာ၊
၆။ bladder cancer ဆီးအိမ်ကင်ဆာ၊
၇။ non-Hodgkin lymphoma န်းဟော့ခ်ျကင်း လင်ဖိုးမား ကင်ဆာ၊
၈။ kidney and renal pelvis cancer ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ၊1
၉။ endometrial cancer သားအိမ်ကင်ဆာ၊
၁၀။ leukemia လူကီးမီးယားကင်ဆာ၊
၁၁။ pancreatic cancer သရက်ရွက်ကင်ဆာ၊
၁၂။ thyroid cancer လည်ပင်းကြီးကင်ဆာ၊
၁၃။ liver cancer အသည်းကင်ဆာ။
လူဦးရေတသိန်းမှာ ၄၃၉့၂ ယောက် ကင်ဆာဖြစ်တယ်။
လူဦးရေတသိန်းမှာ ၁၆၃့၅ ယောက် ကင်ဆာနဲ့ သေဆုံးတယ်။
ကင်ဆာနဲ့သေဆုံးသူတွေထဲမှာ ယောက်ျားက တသိန်းမှာ ၁၉၆့၈ ယောက်နဲ့ မိန်းမက တသိန်းမှာ ၁၃၉့၆ ယောက်ဖြစ်လို့ ယောက်ျားတွေကပိုပြီးကံဆိုးကြတယ်။ ဆောရီး။
မြန်မာပြည်မှာ မဟုတ်တဲ့သတင်းကို ရေးတင်သူတွေများတယ်။ မဟုတ်တာကို ထပ်ရှယ်တဲ့ ပွဲစားတွေလည်းများတယ်။
စဉ်းစားချင့်ချိန်မှုမှာ ကင်ဆာဖြစ်နေတာ ယောက်ျားများသလား၊ မိန်းမများသလား၊ ဆတူလာ။
မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့မည်သည် သာသနာတော်ကျိုး တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးများကို အစဉ်မပြတ် ရွက်ဆောင် အားထုတ် တော်မူအပ်သော အပရိဟာနိယတရားနှင့်အညီ၊ အထူးသဖြင့် အဌင်္ဂီသီလ ဆောက်တည်တော်မူသည့် နေ့ရက်၊ တလလျှင် ရှစ်သီတင်း နေ့ရက်များမှတပါး ကျန်နေ့ရက်များမှာ မင်းမှူး မင်းမတ် မင်းချင်း မင်းခစားတို့နှင့် နံနက်တကြိမ်၊ နေ့တကြိမ်၊ ညတကြိမ် သာသနာတော်ရေး တိုင်းရေးပြည်မှုများကို အစဉ်မပြတ် ဆွေးနွေး ရွက်ဆောင်တော်မူသည်။
စက်တင်္ဘာနာမည်ဟာ Septem (Seven) ကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ ရောမပြက္ခဒိန်အရ သတ္တမမြောက်လ ဖြစ်လို့ပါ။ အဲသည်ခေတ်က တနှစ်မှာ (၁ဝ) လသာရှိတယ်။ ဇန္နဝါရီနဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွေကမပါသေးပါ။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလမှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း (၃) ရက်ကနေ သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၂) ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။
• ပဌမတနင်္ဂနွေနေ့ = Grandparents Day အမေရိက နဲ့ ကနေဒါ အဖိုး-အဖွါးများနေ့
• ပဌမတနင်္လာနေ့ = Labor Day (Labour Day) အမေရိက နဲ့ ကနေဒါ အလုပ်သမားနေ့
• တတိယတနင်္လာနေ့ = ဂျပန် သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့
• ၁ ရက်နေ့ = အူဇဘက်ကစ်စတန် လွတ်လပ်ရေးနေ့
• ၂ ရက် = ဗီယက်နမ် အမျိုးသားနေ့
• ၅ ရက် = Teachers’ Day (အိန္ဒိယ) ဆရာများနေ့
• ၇ ရက် = ဘရာဇီးလ် လွတ်လပ်ရေးနေ့
• ၈ ရက်နေ့ = International Literacy Dayနိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့
• ၁၃ ရက် = Positive Thinking Day အပြုသဘောဆောင်စဉ်းစားရေးနေ့
• ၁၅ ရက် = အယ်လ်ဆာဗာဒို လွတ်လပ်ရေးနေ့
• ၁၅ ရက် = အမေရိကန် ဟစ်ပင်းနစ် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နေ့
• ၁၅ ရက် = International Day of Democracy နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့
• ၁၈ ရက် = National Cheeseburger Day ချိစ်ဘာဂါ နေ့
• ၁၉ ရက် = Puppy Farm Awareness Day ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေး လှုံ့ဆော်ရေးနေ့
• ၂၁ ရက် = International Peace Day နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့
• ၂၄ ရက် = Heritage Day တောင်အာဖရိက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နေ့
• ၂၅ ရက် = မိုဇမ်ဘစ် တော်လှန်ရေးနေ့
• ၂၇ ရက် = World Tourism Day ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလာရေးနေ့
• ၂၉ ရက် = World Heart Day ကမ္ဘာ့နှလုံးနေ့
• ၂၉ ရက် = National Coffee Day ကော်ဖီနေ့
• Sapphire နီလာ (ပြာလဲ့လဲ့) ကျောက်ဟာ စက်တင်္ဘာလရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။
• Aster မေမြို့ပန်း၊ Forget-me-not ပန်းနဲ့ Morning glory ပန်းတွေဟာ စက်တင်္ဘာလရဲ့ ပန်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
• Zodiac (Astrological) Signs ဆယ်နှစ်ရာသီခွင်အရ Virgo ကန်ရာသီ (အပျိုစင်) နဲ့ Libra တူရာသီ (ချိန်ခွင်) တွေ ဖြစ်ကြတယ်။
• Prostate Cancer Awareness Month ယောက်ျားဆီးကျိတ်ကင်ဆာ လှုံ့ဆော်ရေးလ
• Liver Cancer Awareness month အသည်းကင်ဆာ လှုံ့ဆော်ရေးလ
• ၉ ရက် = Fetal Alcohol Syndrome Awareness Day ကလေးသူငယ်အရက်ဒဏ်ရောဂါ လှုံ့ဆော်ရေးနေ့
• ၁၅ ရက် = World Lymphoma Awareness Day လင်ဖိုးမားရောဂါ လှုံ့ဆော်ရေးနေ့
• ၂၁ ရက် = World Alzheimers Day ကမ္ဘာ့ အယ်လ်ဇာမိုင်ယားရောဂါနေ့
• ၂၁ ရက် = International Deaf Awareness Week နားမကြားရောဂါ လှုံ့ဆော်ရေးရက်သတ္တပါတ်
• ၂၅ ရက် = Ataxia Awareness Day (အတက်ဇီယား) အာရုံကြောရောဂါ လှုံ့ဆော်ရေးနေ့
• ၂၈ ရက် = World Rabies Day ကမ္ဘာ့ခွေးရူးပြန်ရောဂါနေ့
• ၅-၉-၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များလှုပ်ရှာမှုကို စတင်ပေးတဲ့အဖြစ်အပျက် ပခုက္ကူမှာဖြစ်တယ်။
• ၉-၉-၁၉၃၉ နေ့မှာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူခဲ့တယ်။
• ၁၈-၉-၁၉၈၈ နေ့မှာ (နဝတ) အမည်နဲ့ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။
• ၂၇-၉-၁၉၈၈ နေ့မှာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။
• ၁၈-၁၂-၁၉၉ဝ နေ့က စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ၁၄-၉-၂ဝ၁၂ နေ့မှာ ဆန္ဒအလျှောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်အခုနေရတဲ့အရပ်မှာ စက်တင်္ဘာဆိုရင် သစ်ရွက်တွေ စိုစိမ်းရာနေ ခြောက်လာ၊ ဝါ၊ ညိုမှောင်၊ ရွှေရောင်တွေ ပြောင်းကြပြီး ဖေါလ် ခေါ် ရွက်ကြွေတဲ့ရာသီရောက်ပါပြီ။ အမြင်မှာ အလှဆုံးနဲ့ နေရထိုင်ရတာလည်း အပူအအေး မလွန်ကဲတဲ့ရာသီ ဖြစ်ပါတယ်။
12. December ဒီဇင်္ဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/december.htm
ဆရာရယ် မေးတဲ့သူတွေက ဆရာ့လို ပညာရှိမဟုတ်တော့ သူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းမေးတာ နားလည်မှုလေးပေးပြီး ဖြေကြားပေးရင်တော့ အထူးကျေးဇူးတင်ကြမှာပါ ဆရာလုပ်ခြင်း မဟုတ်ရပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်္ဗျာ
ရမ်းကုဆရာတွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က ရောဂါစုံအထူးကုတွေကသာ အသက် ကျား မ ကလေးလူကြီး မသိတာကို ဖြေကြတယ်။
ဆရာဝန်ဆိုတာ ကိုယ်ဖြေတာ ကုသတာတိုင်းကို တာဝန်ယူရတယ်။
ယောက်ျား မိန်းမ မသိတာကို ဆေးပေးရင်လွဲနိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ မသိပဲဆေးပေးရင် မိခင်လောင်းရော အထဲကကလေးပါ တခုခုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ကလေးကို လူကြီးလိုဆေးပေးရင် စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။
အခုလိုပြန်ပြန်ပြောရတာမျိုး မကြာခဏလာတယ်။ ကျွန်တော်က ပညာရှိတော့ မဟုတ်။ ဆရာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ကျောင်းနဲ့ ဆေးပေးခန်းလည်း ဝေးကွာမဲ့ ဇနပုဒ်
သည်ကျောက်ကွဲရွာ လောပန်တွေလာမှာ မဟုတ်